MODA | Article Detail | ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Highlight ကာလာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဆိုတာက ဘယ်သူမဆိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ပုံမှန်သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါထက်ပိုပြီး ဆံပင်အထွေးလိုက်ကျွတ်တာ နဲ့ မကြာခဏကျွတ်ပြီး ဆံပင်ပါးလာတာမျိုးကတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီ။ ဆံပင်အလွန်အကျွံကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အဓိကအချက်တွေထဲမှာ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုနဲ့ ဟော်မုန်းမညီမျှမှုတွေအပြင် ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလုပ်ဆောင်နေကျအရာတွေထဲက လွဲမှားနေတဲ့ တချို့အလေ့အကျင့်လေးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်တွေက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေလည်းဆိုတာသိရှိပြီး ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ဆံပင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အလေ့အကျင့်ဆိုးလေးတချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံပင်ကိုချက်ချင်းအခြောက်မခံပဲ အစိုအတိုင်းအကြာကြီးထားတတ်တဲ့သူတချို့ရှိကြမှာပါ။အဲဒီလိုဆံပင်ကိုအစိုအတိုင်းအကြာကြီးထားထားခြင်းက ဆံပင်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှူကိုလျော့နည်းစေပြီး အခန့်မသင့်ရင် ရေရှည်မှာဆံပင်ကျွတ်တာ ၊ပါးတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ကိုပိုနီတေးတင်းကြပ်စွာစည်းနှောင်ခြင်းနဲ့ hair spray တွေတောင့်ခဲနေအောင်ဖြန်းခြင်းတို့ကလည်း ဆံပင်အမြစ်တွေကို pressure တစ်ခုနဲ့ဆွဲထားသလိုဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နဖူးထိပ်ဆံပင်ပါးလာခြင်းနဲ့ ‌ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ နေ့တိုင်းရုံးသွား ၊အပြင်သွား ဆံပင်ကို အနေအထားတစ်မျိုးတည်း ခပ်တင်းတင်းစည်းသွားတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အထူးသတိထားသင့်တဲ့အချက်ပါ။
အပြင်သွားတိုင်းဦးထုပ်အမြဲလိုလိုဆောင်းတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဆံပင်ပါးလာဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဦးထုပ်တွေမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ ပိုးမွှားတွေကပ်ငြိနေနိုင်ပြီး မလျှော်ပဲအမြဲလိုလိုဆောင်းမိနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဦးရေပြားကို infection ဝင်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်ဆံပင်ပါးတာကို ပိုဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဦးထုပ်အမြဲဆောင်းချင်တယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သေချာလျှော်ပြီးမှဆောင်းသင့်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနဲ့ အတွေးများခြင်းတွေကလည်း ဆံပင်ကျွတ် ဆံပင်ပါးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းခံတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ ။ စိတ်ဖိစီးမှူအရမ်းများတဲ့အခါမျိုးမှာ
telogen effluvium လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးထွက်ရှိလာပြီး အဲဒီအရာက ဆံပင်တွေကိုသက်တမ်းမတိုင်ခင် ကျွတ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ထိပ်မပြောင်ချင်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချဖို့လိုမှာပါ။
အိပ်ချိန်အလုံအလောက်မရခြင်းနဲ့ အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်းတွေကလည်း ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကတရားခံတွေပါ။ အိပ်ချိန်အပြည့်အဝမရတာက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအနည်းနဲ့အများ affect ဖြစ်စေတဲ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ၊စိတ်ကျခြင်းတွေနဲ့လည်း များစွာဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဆံပင်အတွက် ဘယ်လိုမှကောင်းကျိုးမဖြစ်စေပါဘူး။
၆. ဆေးလိပ်နဲ့ Diet
ဒါကတော့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေနဲ့ diet လုပ်သူတွေအထူး ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ဆံပင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်‌တချို့ရဲ့ DNA ကို ပျက်စီးစေနိုင်သလို အလွန်အကျွံ Diet လုပ်ခြင်းကလည်း ဆံပင်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုမရရှိအောင် ဖြတ်တောက်ထားသလိုဖြစ်စေတာကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ Diet လုပ်ခြင်းကို အထူးဂရုပြု လျှော့ချသင့်ပါတယ်။
ချက်ခြင်း အရောင်ဆိုးချင်စိတ်ဖြစ်သွားမယ့် ၂၀၂၁ ရဲ့ ဆံပင်ကာလာခပ်မိုက်မိုက်လေးတွေ
အရောင်လေးတွေက ကိုယ်တွေအသားအရေနဲ့ လည်းလိုက်တယ်
ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၀၂၁ ကြီးတောင် ဖင်လှည့်ခေါင်းလှည့်နဲ့ ရောက်လာခဲ့ပြီ..အစစအရာရာ အဆင်မပြေသေးပေမယ့် နှစ်သစ်မှာ ပိုပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ အပြောင်းအလဲလေးလုပ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်။ New Year New Me လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဆံပင်ပုံစံပြောင်းလဲတာကလည်း Must Try ထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၂၁ မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ အရောင်တွေလေးတွေနဲ့ ခေါင်မိုးလဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ။ အရောင်လေးတွေကလည်း မတရားလှလို့ ကြိုပြီး အသိပေးပါမယ်နော်..မဆိုးရ မနေနိုင် ရောဂါထနေရမှာပါလိမ့်မယ်။
Korea မှာကော နိုင်ငံတကာမှာပါ ခေတ်စားမယ့်အရောင်လေးပါ။ Pastel Hair Color ဖြစ်တာကြောင့် ဆိုင်မှာ သေချာသွားဆိုးဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ အရောင်လွင်လွင်လေးတွေက နှစ်သစ်မှာ အသစ်အသစ်တွေလုပ်ဖို့ အားဖြစ်စေမှာပါ။
ဆံပင်အရောင်လုံး၀ ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေ ဒီ အရောင်လေးက အသင့်တော်ဆုံးနော်။ ပုံစံလုံးဝပြောင်းသွားမှာဖြစ်သလို ၂၀၂၁ ရဲ့ Hair Color ထဲက တစ်ရောင်ဆိုတော့ အမိုက်စားလေးဖြစ်နေမှာပါ။
၂၀၂၀ မှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Lisa ဆံပင်လို လူသိများတဲ့ Ear Loop Highlight က ဒီနှစ်မှာတော့ ဆံပင်အတွင်းပိုင်းကို အရောင်ရင့်ရင့် ထားတဲ့ ပုံစံပါ။ 90 style တွေ ပြန်ခေတ်စားလာတာမို့ ဒီ Retro Hair Style ကလည်း လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့ဦးမှာပါ။
Netflix မှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ The Queen's Gambit ကြောင့်ပဲလို့ ပြောရမလား..ဒီ ကြေးနီရောင်ကာလာလေးကလည်း ၂၀၂၁ မှာ အရမ်းလူကြိုက်များနေတဲ့ အရောင်လေးတစ်ခုပါ။ ဆံပင်သိပ်မပျက်စီးသလို အသားအရောင်တိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်ပါ။
Blonde တွေ Sliver တွေ ဆိုးတာမလိုက်ဘူးထင်ရင် Ashy ဘက်ကို သွားလို့ရတယ်နော်။ အာရှဘက်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့အရောင်မို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေနဲ့လည်း ပိုပြီး သင့်တော်မှာပါ။ Cool Tone ဖြစ်တာကြောင့် အသားအရေ နီမြန်းတာ၊ ဝါကျင့်ကျင့်ဖြစ်တာကိုလည်း ပျောက်သွားစေတာမို့ မျက်နှာ ကြည်ကြည်တောက်တောက်လေးလည်းဖြစ်စေတာပေါ့။
နောက်ပိုင်း သဘာဝကို လူတွေက ပိုပြီးမြတ်နိုးလာကြတာ အလှအပ၊ အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုမှာတောင် သိသာလာတယ်နော်။ ဆိုတော့ ၂၀၂၁ ရဲ့ Hair Trend ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ သဘာဝအမဲရောင်လေးလည်းပါလို့ ပျော်လိုက်တော့။ နက်မြောင်တောက်ပနေဖို့ Hair Care လုပ်ဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။
#Hair Colors 2021
ဆံပင်အမြဲစည်းလေ့ရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့် ဆံပင်စည်းပုံစံလေးတွေ
နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ ဆံပင်အမြဲစည်းလေ့ရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေရှိလား။ ကြည့်လိုက်ရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေသူလေးတွေပါ။ ဆံပင်စည်းတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ..ပုံမှန်စည်းနေကျအတိုင်း နေ့တိုင်း မပြောင်းမလဲပဲစည်းရတာ ငြီးငွေ့စရာကြီးနော်။ ခုခေတ်စားနေတဲ့ Hair Accessory လေးတွေနဲ့ လှနေအောင် စည်းလို့ရတဲ့ ပုံစံလေးတွေ လုပ်မကြည့်ချင်ဘူးလား။ စတိုင်လည်းကျ ဘယ်လိုအချိန်မျိူးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်နေတော့ တစ်နေ့တစ်မျိူး မရိုးရအောင် စည်းကြည့်ကြည့်နော်။
ဆံပင်အမြဲစည်းပေမယ့် တခါတလေ စိတ်မပါတဲ့နေ့တွေရှိမှာပါ။ ဒီလိုပျင်းပျင်းရှိနေ့လေးတွေမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အလှဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် ဖဲကြိုးလေးတွေနဲ့ စည်းနှောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်စည်းထားတဲ့ Ponytail ပေါ်မှာ ဖဲပြားလေးဖြစ်ဖြစ်ချည်ရုံပဲဆိုတော့ Effortlessly ကြည့်ကောင်းနေမှာပါ။
ဆံထုံးအကြီးကြီးတွေ မကြိုက်ဘူး။ မိန်းကလေးဆန်ဆန် ရိုးရိုးလေးဝတ်ထားတဲ့နေ့တွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး Hair Style လေးဖြစ်မှာပါ။ ပုံမှန်မြင်နေကျ ဆံပင်တစ်ဝက်ကို ဒီတိုင်းစည်းတာမဟုတ်ပဲ ဒီလိုလေးပြန်ထုံးလိုက်တာက လူငယ်လည်းဆန်စေတယ်နော်။
ခပ်မိုက်မိုက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံလေးတွေ သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေအတွက် တစ်ဝက် Half Ponytail လေးတွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆံပင်အကုန်အပြောင် စည်းရတာမကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ (Editor အပါအဝင်) အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ ဒီနောက်ပိုင်း Hollywood Celebrity ကြားမှာပါ ခေတ်စားလာတဲ့ ပုံစံလေးမို့ Must Try ပါ။
Hair Claw တွေလည်း ပြန်ခေတ်စားလာတာ အားလုံးအသိနော်။ ဒီဆံညှပ်လေးတွေနဲ့ ကပိုကယိုပုံစံလေး Styling လုပ်မလား၊ သေသေသပ်သပ်လေး ညှပ်ထားမလား အမျိူးမျိူး ပြောင်းလဲလို့ရတယ်နော်။ ဒီတိုင်းဆံပင်ကြီးစည်းတာ ပျင်းစရာကောင်းတာမို့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံညှပ်လေးတစ်ခုတော့ ဝယ်ထားလိုက်တော့။
Scrunchie လေးတွေ ပြန်ခေတ်စားလာတာတော့ ဆံပင်စည်းဖို့အတွက် နောက်ထပ် Idea တစ်ခုရတာပေါ့။ လျော့တိလျော့ရဲ ဆံထုံးလေးတွေကို ပိုအထာကျသွားအောင် ဒီလို Scrunchie ခပ်ကြီးကြီးနဲ့ အလှဆင်ကြည့်ပါ။ အထာပိုကျသွားစေမှာ မယုံမရှိနဲ့။
သိပ်အလုပ်ရှုပ်မခံချင်တဲ့ မိန်းကလေးတို့ ညှပ်သင့်တဲ့ ၂၀၂၁ မှာခေတ်စားလာမယ့် Short Hairstyle တွေ
အလုပ်လည်းမရှုပ်၊ Style လည်းကျ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝကလည်း နားလည်ရတော့ခက်တယ်။ Hairstyle ကိုလည်းလန်းလန်းလေးဖြစ်ချင်တယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ အချိန်ပေးပြီးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း မပြင်ဆင်ချင်ကြဘူး။ အလုပ်ရှုပ်မခံချင်ကြဘူး။ အိပ်ယာနိုးလာတာနဲ့ လှနေတဲ့ မျက်နှာ၊ ဆံပင်မျိုး (I woke up like this) မျိုးဖြစ်ချင်ကြတယ်။ အဲ့လို ဆံပင်ကိုသိပ်အချိန်မပေးပဲ လှနေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်အတိုထားဖို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဆံပင်တိုလေးတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်၊ ခေါင်းလျှော်ဖို့၊ ပုံသွင်းဖို့ သိပ်အများကြီးအားထုတ်စရာမလိုပဲ Style ကျနေစေတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်မျက်နှာကျနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်တိုဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ လာမယ့် ၂၀၂၁ နှစ်သစ်မှာ Hairstyle အသစ်လေးတွေနဲ့ လန်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ 2021 Trendy Short Hairstyle လေးတွေကိုတော့ ညှပ်ကြည့်သင့်တယ်နော်။
Pixie Cut ထက်ပို Sexy ကျပြီးပို Hot တဲ့ Hairstyle ရှိဦးမှာလား။ ထိန်းသိမ်းရလည်း အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီး ကိုယ့် မျက်နှာကိုလည်းအများကြားမှာထင်းနေစေမှာပါ။ Pixie Cut ကအရမ်းမျက်နှာကြီးသူတွေ၊ ဝိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့တော့ သိပ်မလိုက်ဖက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Confident ရှိတယ်ဆိုရင် တကယ်ထားကြည့်သင့်တဲ့ Hairstyle ပါ။
ဆံပင်အရှည်မထားချင်ဘူး။ အရမ်းလည်းတိုအောင်မညှပ်ပစ်ရက်ဘူး ဆိုသူတွေအတွက် ဂုတ်လောက်အရှည်နဲ့ Lob Hairstyle လေးတွေကအဆင်အပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ သူ့ကို Long-Bob လို့လည်းတစ်ချို့ကခေါ်ကြတယ်။ Shoulder-Length ဖြစ်တာမို့ ဆံပင်စည်းလို့လည်းရသလို ကြိုက်သလိုလည်း ပုံသွင်းရလွယ်တဲ့ Hairstyle လေးပါ။
ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ Bob Hairstyle တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ Blunt Cut ဆိုတာက Bob ကို Step တွေ၊ အဖျားကိုချွန်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဆံပင်အဖျားကို ရှေ့နောက်တညီတည်းတုံးတိ ညှပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ရိုးရှင်းတယ်ထင်ရပေမယ့် ထားတတ်ရင် အရမ်းအထာကျတဲ့ Hairstyle ပါ။ အဝတ်အစားတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေပြီး ဆံပင်ထူတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုပိုလိုက်ပါတယ်။
1960 လောက်က Hollywood မင်းသမီးတွေရဲ့ Favourite ဖြစ်တဲ့ ဂုတ်အဖျားလန်လန်လေးနဲ့ Omega Hairstyle လေးကို Ariana Grande “Positions” Music Video မှာအပြင် Fashion Runway တွေမှာလည်းပြန်တွေ့လာရပြီနော်။ မိန်းကလေးဆန်ဆန် ချစ်စရာကောင်းပြီး အထူးတလည်ကြီးပြင်ဆင်နေစရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဂုတ်လောက်ဆံပင်တွေကအဲ့အရှည်လောက်ဆို ဂုတ်ထောက်ပြီးသူ့အလိုလိုလန်နေပြီလေ။
ဒီ ဆံပင်လေးကတော့ စပေါ်တည်းက အချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ၊ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း မိန်းကလေးတွေ အကြိုက်ဆုံး Hairstyle List ထဲမှာရှိနေဦးမှာသေချာပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းရသက်သာတယ်၊ Fashionable ဖြစ်တယ်၊ မျက်နှာကိုလည်း ပိုပြီးငယ်ရွယ်သွားစေတယ်။ တစ်ချို့ကဒီဆံပင်ကို အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့မလိုက်ဘူးပြောတယ်။ အဲ့ဒါဆို Vogue Magazine ကြီးရဲ့ Former Chief-Editor “Anna Wintour” ဒီဆံပင်လေးနဲ့ဘယ်လောက်မိုက်နေလဲပဲကြည့်လိုက်တော့နော်။
1980's ရဲ့ Disco နေ့ရက်တွေကိုတစ်ခါပြန်သွားကြည့်ရအောင်။ Punk Hair လို့လည်းလူသိများကြတဲ့ Mullet Hairstyle ကိုအဲ့အချိန်အခါက အမျိုးသားအမျိုးသမီးမရွေး နှစ်ခြိုက်ကြတဲ Hairstyle ပါ။ ဒီ Style ကို ၂၀၂၁ မှာပြန်ညှပ်လာကြတယ်။ ဂေါ်တယ်ဆိုတာထက်ကိုဂေါ်တာမို့ Baddie ဆန်ဆန် Edgy ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုသာညှပ်ကြည့်ဖို့ Recommend လုပ်ချင်ပါတယ်။
Grace of Twiggy
တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကျော်မော်ဒယ်/မင်းသမီး Twiggy ရဲ့ Iconic ဆံပင်အတိုလေးဖြစ်တဲ့ Pixie Bob လေးကလည်း အတိုညှပ်ချင်နေပေမယ့် Pixie လောက်လည်း ယောင်္ကျားမဆန်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေညှပ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးပါ။ Twiggy Hairstyle အတိုလေးက Bob လိုလည်းမရှည် Pixie လိုလည်းအရမ်းမတိုပဲ လုံးလုံးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ Oval Shape မျက်နှာ၊ Heart Shape မျက်နှာရှိပြီး ဘေးခွဲထားတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆို ဒီ Hairstyle လေးက Perfect ပဲနော်။
#2021 Trendy Short Hairstyles
ဆံပင်အမြဲ တသသနဲ့ မထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး Hair Color တွေ
ဆံပင်သိပ်မပျက်စီးစေမယ့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူတဲ့ Hair Color လေးတွေ
ဆံပင်ဆိုးတာက ကြည့်လို့တာကောင်းနေတာ နောက်ကနေ လိုက်ပြီးထိန်းသိမ်းရတာ မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ မူလဆံပင်ကို Chemical တွေနဲ့ အရောင်ပြောင်းလဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရောင်ဆိုးထားတဲ့ ဆံပင်တွေက ပုံမှန် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းနေကြပုံစံနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်သိပ်မပျက်စီးစေမယ့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူတဲ့ Hair Color လေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆံပင်အမဲတွေ ပြန်ထွက်လာလာ၊ အရောင်ပျယ်သွားရင်တောင် ကြည့်ကောင်းနေမှာမို့ တကူးတကကြီး ဆံပင်ကို သမနေချင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။
Chocolate Brown က မျက်နှာကိုလင်းသွားစေသလို ကရိကထမများစေမယ့်အရောင်ပါ။ ဆံပင်စစချင်းဆိုးမယ့် မိန်းကလေးတွေနဲ့လည်း သင့်တော်ပြီး နဂိုလ်ဆံပင်အရောင်နဲ့လည်း သိပ်မကွာတာမို့ အရောင် ငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုးချင်ရင် Must Try ပါ။
Dip Dye ဆိုတဲ့အတိုင်း ထိပ်ကနေစဆိုးတာ မဟုတ်ပဲ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကိုသာ အရောင်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆံပင်ကို အဆိုးဆုံး ဒီတိုင်းတောင်ပစ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဆံပင်အရင်းကို ထိဖို့ အဝေးကြီးဖြစ်လို့ ပျက်စီးမှာ မစိုးရိမ်ရတဲ့အပြင် ညှပ်ချလိုက်လည်း No Problem ပဲနော်။
3. Peekaboo Hightlight
ဒီနောက်ပိုင်း မိန်းကလေးတွေကြားမှာ ခေတ်စားနေသလို Blackpink က Lisa ဆိုးထားတဲ့ပုံစံလေးပါ။ ဆံပင်စည်းလိုက်၊ သပ်လိုက်မှ မြင်ရတဲ့ Hair Style မို့ ဆံပင်ပုံစံ အရမ်းကြီး ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။ ပြီးတော့ Highlight က အများဆုံးမှ နှစ်ရောင်လောက်ဆိုတော့ မကြိုက်ရင် အမဲပြန်ဆိုးလို့လည်း ရတာပေါ့။
4. Brown Highlights
ကိုယ့် မူလဆံပင်အမဲမှာ ဒီလို အညိုရောင် Highlight ဖျော့ဖျော့လေးတွေ ဖောက်လို့ရပါတယ်။ ဆံပင်ပိုထူပြီး အရောင်စိုနေသလိုဖြစ်စေတဲ့အတွက် ဆံပင်သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ ကွက်တိပါ။ ညိုညိုစိုစိုကောင်မလေးတွေနဲ့ ပိုပြီးလိုက်ဖက်ကြည့်ကောင်းနေမယ့်အရောင်ပါ။
တစ်ခေါင်းလုံး Blonde လုပ်ချုလိုက်ဖို့ Confident မရှိသေးဘူးဆိုရင် Bronde လေးကို အရင် Try လို့ရပါတယ်။ အညိုနဲ့ ရွှေရောင်မကျတကျလေးဆိုတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်သလို ဆိုးဆေးသိပ်မထိတာမို့ ဆံပင်လည်း ထင်သလောက် မပျက်စီးတော့ဘူးပေါ့။
ဘိုဆန်ဆန်အရောင်လေးနော်။ ဆံပင်ဆိုးထားတာ သိသာချင်ပြီး အမြဲထိန်းသိမ်းတာမျိူးလည်း မလုပ်ချင်ရင် ဒါမျိူးလေးက အဆင်ပြေမှာပါ။
#Low Maintenance Hair Color
မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံးဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင်း မိန်းကလေးအများစုဟာ ဆံပင်အရှည်ထားရတာကိုနှစ်သက်ကြသလို မိန်းကလေးတွေနဲ့ဆံပင်အရှည်ဆိုတာ ခွဲထားလို့မရတဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုလိုသဘောထားသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်ကာလပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ မိန်းကလေးတွေဟာ ဆံပင်အရှည်ကိုဆက်ပြီးမြတ်မြတ်နိုးနိုးထားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလို ခေတ်ရေစီးအရရော ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိဖို့ပါ ဦးစားပေးစဉ်းစားလာကြတဲ့အခါမှာတချို့က ဆံပင်ခပ်တိုတိုကပ်ကပ်လေးတွေညှပ်လာတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဆံပင်အတိုဟာဖက်ရှင်ရှူထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း ခေတ်ဆန်ပြီးအမြင်တစ်မျိုးဆန်းသလို ကျန်းမာရေးရှူထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း အများကြီးကောင်းကျိုးပေးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ဆံပင်အရှည်ထားတာနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တင့်တယ်သလို ဆံပင်အတိုကပ်ကပ်လေးတွေညှပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ရှက်မနေ တွေးပူမနေကြပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ညှပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အောက်ကအချက်လေးတွေနဲ့ သက်သေပြလိုက်ပါရစေ။
ဆံပင်အတိုသမားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအားသာချက်ကတော့ ဆံသားထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်းပါ။ ဆံပင်ရှည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဆံပင်ရှူပ်တာ ၊ ငြိတာ ၊ ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်တာတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းရ တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပေမယ့် ဆံပင်အတိုသမားတွေမှာတော့ ဒီဒုက္ခတွေကမရှိသလောက်နီးပါးပါပဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဆံပင်အတိုသမားတွေအနေနဲ့ ဆံပင်ရှည်သူတွေထက်စာရင် ဗောက်ထဖို့အခွင့်အလမ်း ပိုပြီးနည်းပါးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းကတော့ ဗောက်ထခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းမဖြစ်စေဖို့အတွက် ဦးခေါင်းရဲ့ အရေပြားအောက်ကနေ အဆီတွေကို ပုံမှန်ထုတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ဆံပင်တိုသူတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အဆီကိုထုတ်ပေးဖို့ မခဲယဉ်းပေမယ့် ဆံပင်ရှည်သူတွေအတွက်တော့ ဦးရေပြားက အဆီကို လုံလောက်အောင် ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့် ဦးရေပြား ခြောက်သွေ့ဗောက်ထခြင်းမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။
အိပ်ရာကနိုးရင် ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ဆံပင်တွေအထွေးလိုက်ကျွတ်နေတာမြင်ရတာနဲ့ ခေါင်းဖြီးတိုင်း၊ခေါင်းလျှော်တိုင်း ဆံပင်တွေကျွတ်ပြီးပါလာတာမျိုးတွေက လူကို တော်တော်လေးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပါ။ တချို့ဆို အစားအသောက်တွေထဲမှာပါ ဆံပင်တွေကျွတ်ပြီး ပါလာတတ်တဲ့ ဒုက္ခမျိုးနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရပါသေးတယ်။ ဆံပင်တိုတဲ့သူတွေမှာတော့ အဲဒီဒုက္ခတွေ တော်တော်လေးကို နည်းပါးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘိုကေပုံစံမျိုး ညှပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ဒီဒုက္ခက လုံးဝကိုမရှိသလောက်ပါပဲ။
ရာသီဥတုပူတဲ့အခါမှာ ခံရအခက်ဆုံးက ဆံပင်ရှည်တဲ့သူတွေပါ။ နေပူပူအောက်မှာ သွားလာရတဲ့အခါ ၊ အစားအသောက်ခပ်ပူပူကိုစားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဆံပင်ရှည်သူတွေအနေနဲ့ လည်ဂုတ်တစ်ဝိုက်ချွေးတွေထွက်ပြီး အနေရခက်တာမျိုး ၊စိတ်အိုက်တာမျိုးနဲ့ ခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆံထုံးထုံးထားတဲ့အချိန် ၊ဆံပင်စည်းထားတဲ့အချိန်ဆိုရင်သိပ်မသိသာပေမယ့် ဆံပင်အတိုသမားတွေမှာရတတ်တဲ့ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်ခြင်းမျိုးတော့ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိစ္စတစ်ခုခု အကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်လို့ အရေးတကြီးသွားရတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဆံပင်အတိုသမားတွေက တစ်ပန်းသာပြန်ပါတယ်။ ဆံပင်အရှည်သမားတွေ ခေါင်းလျှော်ပြီး ခေါင်းခြောက်အောင် Dryer တွေမှုတ် ၊ ပုံသွင်းနေရတဲ့ ကြာချိန်တွေထက် ဆံပင်အတိုသမားတွေက ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်အရမ်းတိုအောင်ညှပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင် ပုံတောင် ထူးထူးထွေထွေသွင်းစရာမလိုပဲ အဝတ်အစားလဲပြီးထသွားလိုက်ရုံပါပဲ။
#Long Hair Problem
သင့်မျက်နှာကျနဲ့ လိုက်ပြီး ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ရှေ့ဆံမြိတ်ပုံစံ
ဘယ်ဆံပင်ပုံစံက ကိုယ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မလဲ
ဆံပင်ဆိုတာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယစာမျက်နှာဆိုသလိုပဲ ကိုယ်ထားမယ့် ဆံပင်ပုံစံ က ကိုယ်နဲ့ လိုက်၊ မလိုက် သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ မျက်နှာကျနဲ့ လိုက်ပြီး ဆံပင်ပုံစံအမျိူးမျိူးရှိလို့ ရှေ့ဆံပင်ညှပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအချက်တွေ ထည့်စဉ်းစားဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ အခွင့်အရေးနှစ်ခေါက်ပြန်မရတဲ့အထဲမှာ ရှေ့ဆံပင်ညှပ်တာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဆိုတာ လက်ခံကြတယ်ဟုတ်။ ဆိုတော့ ကိုယ်မျက်နှာကျ လေးထောင့်လား ၊ အဝိုင်းလားပေါ်မူတည်ပြီး ရှေ့ဆံပင်လှလှလေးတွေ ညှပ်ဖို့ ဘယ်ဆံပင်ပုံစံက ကိုယ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ရှေ့ဆံပင်တွေက မျက်နှာကို လုံးဝန်းစေတဲ့အပြင် ပိုဖောင်းသွားသယောင်ဖြစ်စေလို့ မျက်နှာဝိုင်းတဲ့သူတွေက Hair Bang ထားမယ်ဆို သတိထားရမှာပါ။ Curved Shape ပုံစံ Side Bang တွေက ပါးပါးချွန်ချွန် Wispy Bang တွေထက် ပိုပြီးလိုက်ဖက်မှာပါ။ နောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ အတိဆံပင် ညှပ်မယ်ဆိုလည်း Blunt Baby Bang ပုံစံလေးတွေ ညှပ်လို့ရပါတယ်နော်။
လေးထောင့်ကျတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေက ရှေ့ဆံပင်ညှပ်တော့မယ်ဆိုရင် မျက်ခုံးရဲ့ အောက်နားလေးထိ အရှည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမျက်နှာကျတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးက Long, Layered Bangs နဲ့ Curtain Bangs တွေပါ။ မျက်နှာ Shape ကို ပျော့ပျောင်းသွားစေပြီး မျက်နှာကို အချိူးကျအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ကပ်ကြေးနဲ့ Professional ကျကျ သေချာလေး ညှပ်ထားတဲ့ Chopped Hair တွေက Heart Face လေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်နေတတ်ပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်းကျယ်ပြီး အောက်ပိုင်းသေးသွယ်သွားတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေဖြစ်လို့ မေးစေ့နေရာကို အာရုံလွဲဖို့ လိုပါတယ်။ ဘေးဘက်ရှည်ပြီး အလည်မှာ တိုသွားတဲ့ Crescent Bang တွေက အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေက ကံအကောင်းဆုံးသူတွေပါ။ ဆံပင်ပုံစံတော်တော်များများ ပြောင်းလဲလို့ရသလို လိုက်ဖက်ကြည့်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ စူပါမော်ဒယ်တွေ အညှပ်များတဲ့ Blunt Bang Hair Style က Oval သမားတွေအတွက်ပါ။ သူက Layer တွေမပါပဲ နုဖူးပေါ်မှာ တိတိဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ကျနေတာမို့ မျက်နှာကျလှတဲ့ Oval တွေနဲ့ လှနေတတ်ပါတယ်။
#Face Shape and Hair Style
ဆံပင်ဖြောင့်စက်တစ်ခုတည်းရှိရုံနဲ့ ပုံဖော်နိုင်မယ့် Hair Style အမျိူးမျိူး
ဆံပင်လေးတွေ ဖြောင့်စင်းချင်လို့ ဆံပင်ဖြောင့်စက်ကို ဝယ်ထားတာမှန်ပေမယ့် ပိုပြီးတန်သွားအောင် သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဆံပင်ပုံပြောင်းဖို့ ကောက်စက်တွေ၊ အခြား Tool တွေ ထက်ဝယ်စရာမလိုလောက်အောင် အသုံးတည့်တာမို့ Pro ဆန်ဆန် ဆံပင်ဖြောင့်စက်ကို သုံးကြည့်ကြမယ်… အပြင်တွေထွက်လို့မရသေးခင် အိမ်မှာပဲ အရင်ဆုံး စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်ကြည့်ရအောင်နော်။
Bed Hair Curl
ကောက်သားများတာမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံပင်လည်း မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပေါ့ပေါးပါးပါး ဒီလိုပုံစံ စမ်းကြည့်နော်။How to: ဆံပင်ကို အရင်းကနေ Twist လုပ်ပြီး ဖြောင့်စက်နဲ့ အပူပေးပါ။ ဆံပင်အဖျားရောက်ဖို့ တစ်လက်မ၊ နှစ်လက်မလောက်ပဲ လိုတော့ရင် ရပ်လိုက်ပါ။ တစ်ခေါင်းလုံးပုံသွင်းပြီးရင်တော့ Hair Brush နဲ့ ဖြီးချလိုက်ပါ။ Efforlessly လှနေတဲ့ အထာကျကျ Hair Style ကိုရမှာပါနော်။
ကိုးရီးယားစတိုင် ရှေ့ဆံမြိတ်လှလှလေးကို ဖြောင့်စက်လေးနဲ့ ပုံသွင်းလို့ရတယ်နော်။ ဖြောင့်စက်အကြီးတွေထက် Mini Hair Straightener လေးတွေက ရှေ့ဆံပင်လေးတွေကို ပုံသွင်းလို့ ပိုကောင်းပါတယ်။
How to: ရှှေ့ဆံပင်ကို Section သုံးခုခွဲပါ။ အလည် Section ကို Korea Style Bang လေးဖြစ်အောင် အတွင်းကို ကွေးပြီး အပူပေးပါ။ ဘေးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ Section နှစ်ခုကိုတော့ အပြင်ဘက် Direction အတိုင်း အပူပေးပါ။
ရုံးတွေ၊ Interview တွေသွားရင် Ponytail သပ်သပ်ရပ်ရပ်စည်းသွားတာက First Impression နဲ့တင် အမှတ်ပြည့်ရနေမှာပါ။ ရိုးရိုး Ponytail ထက် Fashion ကျကျ Ponytail လေးက လူငယ်တွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တယ်နော်။
How to: Pony စည်းပြီး နောက်မှာ ချန်ခဲ့တဲ့ ဆံပင်တွေကို ဆံပင်ကျနေတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် 180 Degree လှည့်ပြီး ဖြောင့်စက်ဆွဲပါ။
ဆံပင်ပါးတဲ့ ပျိူမေတွေ အုံထူတဲ့ပုံစံကို ဆံပင်ဖြောင့်စက်လေးနဲ့ ဒီလိုလုပ်လို့ရသေးတယ်။
How to: တစ်ခေါင်းလုံးက ဆံပင်ကို Section နှစ်ခုခွဲပါ။ အပေါ်ပိုင်းကို ဖြောင့်စက်နဲ့ အနည်းငယ် ကောက်သားပေါ်ရုံ အပူပေးပြီး ဖွပါ။ နောက်မှ အောက် Section ကိုဒီလိုပုံစံပဲ ပြန်ပုံသွင်းပါ။
Glam Hair Look
ဆိုင်က လုပ်ပေးတဲ့ Hair Look ကို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတယ်နော်။ လိုအပ်မှာက ဆံပင်ဖြောင့်စက် တစ်ခုတည်းပဲ။
ဒါကတော့ အရှင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဖြာလန်ကျဲတဲ့ဆံပင်တွေ၊ ကောက်သားများနေတဲ့ ဆံပင်ကို သေသေသပ်သပ်ဖြစ်အောင် ဖြောင့်စက်ဆွဲလိုက်တာပါ။
#Hair Styling with Hair Straightener
ရှေ့ဆံပင်မညှပ်ခင် ပြန်ပြီး စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်များ
မိန်းကလေးတွေနဲ့ ရှေ့ဆံပင်ဆိုတာ မဟာရန်သူတွေပါ။ ဆံပင်ကို တစ်ခုခု မလုပ်ရရင် မနေနိုင်တဲ့ အကျင့်နဲ့ ရှေ့ဆံပင်နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ တကယ့် အမှားအကြီးကြီးကို ဖန်တီးမိတာပါပဲ။ သူများတွေညှပ်တာတွေ့လို့ ကိုယ်နဲ့ လိုက်မလား ညှပ်ကြည့်တာကနေ စလိုက်တာပဲနော်။ ညှပ်ပြီးတိုင်း စိတ်ညစ်ရတာလည်း အမှတ်မရှိ ဒီဆံပင်ကိုပဲ သွားသွားကလိနေတာ။ ကဲ အခုကော ရှေ့ဆံပင်ညှပ်ဖို့ သေချာပြီလား...ဇဝေဇဝါ မသေမချာဖြစ်နေရင်တော့ ဒီ Article လေးကို အရင်ဆုံးဖတ်ဖို့တော့ လိုမယ်နော်။
မနက်တိုင်း အချိန်အကုန်မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရှှေ့ဆံပင်ညှပ်တာက လုံးဝနိုးနိုးနိုးပါ။ ကိုးရီးယားစတိုင် See Through Bang တွေဆိုတာက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာလှနေတာ၊ ပုံသွင်းရတာ တော်တော်ကို အချိန်ကုန်ပါတယ်။ နုဖူးပေါ်မှာ ဝဲ၀ဲကုပ်ကုပ်လေးကျနေဖို့ဆိုတာ မနက်ဒီတိုင်း ထလာပြီး ဆံပင်ဖြီးရုံနဲ့ မရပါဘူး။ Roller တွေ၊ Hair Spray တွေနဲ့ Blow Dry အကူအညီတွေယူရတာမို့ ရှေ့ဆံပင်ညှပ်ဖို့ သေချာပြီလား။
Bang တွေက မျက်နှာရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို နေရာယူလိုက်တာဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်က မျက်နှာတိုတယ်ဆိုရင် ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် မျက်နှာအရွယ်အစားကို ပိုပြီး ကျူံလိုက်သလိုဖြစ်တာကြောင့် မျက်နှာတိုတိုလေးပုံစံ ဖြစ်စေမှာပါ။
ကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆံပင်ကို ညှပ်ပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ အရှည်ပမာဏ မရောက်မချင်း ညှပ်ရင်း လက်လွန်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေကို ခဏခဏကြားဖူးမှာပါ။ ရှေ့ဆံပင်ညှပ်တာ ဘာခက်လို့လဲဆိုတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ စိန်မခေါ်လိုက်ပါနဲ့။ ကပ်ကြေးကို ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက လုံးဝနောက်ပြန်ဆုတ်လို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သူများတွေကလည်း လိုက်တယ်ပြောတယ်၊ ကိုယ်ကလည်း စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ညှပ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီဆံပင်တွေက ပြန်မရှည်လာတော့ဘူးလား။ အပေါ်က ပြောခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်ညှပ်ဖို့ကလည်း အန္တရာယ်များတော့ Hair Salon ကို သွားကို သွားရမှာပါ။ ညှပ်ခါစလို ဆံပင်အနေအထား အမြဲရနေဖို့ သုံးပတ်ခြား တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် ဆံပင်အရှည်မြန်တဲ့သူဆို နှစ်ပတ်ခြား တစ်ခါ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သွားရတာနဲ့ ပိုက်ပိုက်ကတော့ အခြေအနေဟန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်ဖို့ အားအပေးဆုံးက ဆံပင်တွေပါ။ Front Bang တွေက မျက်နှာမှာ အချိန်တိုင်းလိုလို ရှိနေမှာဆိုတော့ ဝက်ခြံတွေကို ကြိုဆိုနေသလိုပါပဲ။ အထူးသဖြင့် နဖူးနားမှာ ဝက်ခြံတွေများနေမယ့် အဖြစ်ကိုတွေးကြည့်ပါ။
ကိုယ်က ဆံပင်ပြောင်းရတာ မကြိုက်ဘူး၊ ပုံစံတစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်က ကိစ္စမရှိလောက်ပါဘူး။ ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းတတ်တဲ့သူ၊ ပြောင်းချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုပါမယ်။ ရှေ့ဆံပင်ဆိုတာက ညှပ်လိုက်ရင်တာ ခဏ၊ ပြန်ရှည်လာဖို့ တော်တော်လေးကို စောင့်ရပါတယ်။ ပြန်ရှည်လာဆိုတာနဲ့ ပုံမကျတဲ့အပြင် ထိန်းသိမ်းရခက်တာမို့ I Hate My Hair ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောမိမှာပါ။
#Home Hair Cut